နယ်သာလန်နိုင်ငံ(ဒတ်ချ်: Nederland [ˈneːdərlɑnt] ( ))သည် ဥရောပအနောက်ပိုင်းတွင်ရှိသော အဓိကတည်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကာရစ်ဘီယံဒေသမှ နယ်မြေအစိတ်အပိုင်းအချို့နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်ကျင့်သုံးသည့် နယ်သာလန်ဘုရင်နိုင်ငံတော်(Kingdom of the Neltherlands)၏ အကြီးဆုံးသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထိုနယ်သာလန်နိုင်ငံကို ဟော်လန်နိုင်ငံဟု တရားဝင်မဟုတ်သော အသုံးရှိသည်။ ဥရောပတွင် ပြည်နယ် ၁၂ ခု ပါဝင်ပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံနှင့် အနောက်မြောက်တွင် မြောက်ပင်လယ်တို့နှင့် ထိစပ်နေပြီး မြောက်ပင်လယ်ရှိ ရေပြင်နယ်နိမိတ်သည် ထိုနိုင်ငံတို့နှင့်အပြင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ပါ ထိစပ်၍နေသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ($, USD)[မှတ်စု 4]
UTC−4 (AST)[မှတ်စု 5]
+31, +599[မှတ်စု 6]
.nl, .bq[မှတ်စု 7]
သွားခဲ့သော ခရီးမိုင်အရှည်၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို အသုံးပြု၍ သွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ရထားကို အသုံးပြု၍ သွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသော ဥရောပနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် ဒတ်ချ်မီးရထားကွန်ယက်သည် ၃,၀၁၃ ကီလိုမီတာရှိပြီး အ​တော်ကို ထူထပ်ပါသည်။ မီးရထားကွန်ယက်ကို ခရီးသည်သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေးအတွက် အဓိကထား အသုံးပြုပြီး အဓိက မြို့ကြီးနှင့် တခြား​သော မြို့များကို ဆက်သွယ်ပေးထားသော မီးရထားဘူတာရုံ ၄၀၀ ​ကျော်ရှိသည်။ မီးရထားသွားလာမှုနှုန်းမှာသွားလာမှုနည်း​သော မီးရထားလိုင်း[မှတ်စု 8]တွင် တနာရီတွင် ရထား ၂ စီးခန့်ရှိပြီး ပုံမှန်သွားလာမှုရှိ​သော မီးရထားလိုင်းတွင် တနာရီ မီးရထား ၄ စင်းခန်ရှိကာ သွားလာမှုထူထပ်​သော လိုင်းတွင် တနာရီ ၈ စင်းမျှရှိသည်။ ဒတ်ချ် နိုင်ငံ​တော် မီးရထားကွန်ယက်တွင် ​ကျောင်းသားများအတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ထိုအခမဲ့စနစ်တွင် အမ်စတာဒမ်မီသရိုပိုလစ်တန်ဧရိယာမှ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နယ်စပ်ကို ဖြတ်သန်း​၍ လန်ဒန်နှင့် ပဲရစ်ကို ​ပြေးဆွဲ​သော HSL-Zuid အမြန်မီးရထားလိုင်းပါ ပါဝင်သည်။
စက်ဘီးဖြင့် ခရီးသွားခြင်းသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုသည် အပြုအမူဖြစ်ပြီး သွားလာမှုခရီးမိုင်အရှည်မှာ ရထားဖြင့်သွား​သော ခရီးမိုင်အရှည် နီးပါးဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ်တို့တွင် စက်ဘီးအ​ရေအတွက် ၁၈ မီလီယံမျှ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နိုင်ငံသားဦး​ရေအရ တစ်ဦးလျှင် စက်ဘီးတစ်စီးထက်မက ပို၍ပိုင်ဆိုင်ကြသည်ဖြစ်ရာ လမ်းမ​ပေါ်တွင် သွားလာကြ​သော ကားအ​ရေအတွက် ၉ မီလီယံခန့်ထက် နှစ်ဆ ပို၍များပြားသည်။  ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဥ​ရောပစက်ဘီးစီးဖက်ဒ​ရေးရှင်း၏အဆိုအရ နယ်သာလန်နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတို့ကို ဥ​ရောပတွင် စက်ဘီးစီးခြင်းကို နှစ်သက်ဆုံးသော နိုင်ငံများအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့​သော်လည်း ဒတ်ချ်(၃၆%)သည် ဒိန်းမတ်(၂၃%)ထက် သမာရိုးကျ​နေ့ရက်များတွင် စက်ဘီးဖြင့် ခရီးသွားလာခြင်းကို ပြုမှုကြသည်။[မှတ်စု 9] စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက် လိုအပ်​သော အ​ခြေခံ အ​ဆောက်အဦများ ပြည့်စုံပြီး သွားလာမှုများပြား​သော လမ်းများ၌တွင်ပင် စက်ဘီးစီးလမ်းများအတွက် ၃၅,၀၀၀ ကီလိုမီတာ ခန့်အရှည်ရှိသော သီးခြားခွဲထားသော လမ်းများကို ပြုလုပ်ထားသည်။ သွားလာမှုရှုပ်​ထွေး​သော လမ်းဆုံများတွင် စက်ဘီးစီးသူများအတွက် သီးခြားမီးပွိုင့်များကို တပ်ဆင်ထားသည်။ မြို့​တော်ရှိ စင်တာများ၊ မီးရထား ဘူတာရုံများတွင် စက်ဘီးများ ထားရှိရန် ရပ်နား​နေရာများကို ပြုလုပ်၍ထားသည်။
နယ်သာလန် ပရိုတက်စတင့် ဘုရားကျောင်း[မှတ်စု 10] (15.5%)
အခြားသော ခရစ်ယာန်ဘာသာများ[မှတ်စု 11] (4.6%)
အနုပညာ၊ ဒဿနိကဗေဒနှင့် စာပေ
ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်
၁၆ ရာစုနှစ်တွင် တည်​ထောင်ခဲ့​သော ​လေဒင့်တက္ကသိုလ်ကဲ့သို့ တက္ကသိုလ်များတွင် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အရှေ့တောင်အာရှလေ့လာရေးဌာနများ ​ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ​[မှတ်စု 12] လေဒင့်တက္ကသိုလ်မှ Christiaan Snouck Hurgronje ကဲ့သို့ ပညာရှင်များ ​မွေးထုတ်​ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားနှင့် ယဉ်​ကျေးမှုကို အထူးပြု​လေ့လာကြသူများ ယခုထက်တိုင်​အောင် ရှိ​သေးသည်။ ​လေဒင့်တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အ​ရှေ့​တောင်အာရှနှင့် ကာရစ်ဘီယံ​လေ့လာ​ရေး နယ်သာလန်​ တော်ဝင်အင်စတီကျူ(KITLV)များသည် ယ​နေ့အချိန်ထိတိုင်​အောင် အင်ဒိုနီးရှား​လေ့လာ​ရေးတွင် ဉာဏနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ နေရာများအဖြစ် ရှိ၍နေသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ အခြားလေ့လာနိုင်သေးသော နေရာများမှာ အမ်စတာဒမ်ရှိ မနုဿဗေဒဆိုင်ရာ Tropenmuseum ပြတိုက်ဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှား အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုးခွဲ‌ဗေဒ၊ မနုဿဗေဒနှင့်ဆိုင်သော များပြားလှစွာသော စုဆောင်းမှုများ ရှိ၍နေသည်။
အမ်စတာဒမ်မြို့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအရ မြို့တော်ဖြစ်သော်လည်း အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တော်ဝင်မိသားစုသည် ဟိတ်မြို့တော်တွင် ရုံးစိုက်ကြသည်။
ဒတ်ချ်ဘာသာအပြင် အထူးမြူနီစပါယ်ဒေသများဖြစ်သော ဆာဘာကျွန်းနှင့် စိန့်ယူထရေးရှပ်ကျွန်းတို့တွင် ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ဘာနေယားကျွန်းတွင် ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ Papiamentu ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး အနောက်ဖရီရှန်းဘာသာစကားကို ဖရီစ်လန်းပြည်နယ်တွင် ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ 
Having ratified the European Charter for Regional or Minority Languages in 1996, the Dutch government recognises Dutch Low Saxon, Limburgish, Sinte Romani and Yiddish as regional or non-territorial minority languages.
ယူရိုကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ဥရောပအခြမ်းတွင် သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပြီး ဒတ်ချ်ဂီဒါအစား ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အစားထိုးသုံးစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ကာရစ်ဘီယံနယ်သာလန်တွင် သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပြီး နယ်သာလန် အန်တီလီယန်းဂီဒါအစား ၂၀၁၁ တွင် အစားထိုးခဲခြင်းဖြစ်ပြီးသည်
+599 was the country code designated for the now dissolved Netherlands Antilles. The Caribbean Netherlands still use +5997(for Bonaire), +5993(for Sint Eustatius), and +5994(for Saba).
.nl သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက် ယေဘုယျ အင်တာနက် ထိပ်ဆုံးဒိုမိန်းအမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် .eu ဒိုမိန်းကိုလည်း အခြားသော ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများနှင့် မျှဝေအသုံးပြုသည်။ .bq ကို ကာရစ်ဘီယံနယ်သာလန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော်ငြား အသုံးပြုခြင်း မရှိကြပေ။
Provided statistics show Protestants by their allegiance to congregations of two denominations that do not exist anymore. In 2004, the Dutch Reformed Church (NHK), the Reformed Churches in Netherlands (GKN) and the Evangelical Lutheran Church in the Kingdom of the Netherlands merged to form the Protestant Church in the Netherlands (PKN) and officially no longer exist. However, many people still tend to give their older affiliation even after the merger. People who declared themselves simply as belonging to the Protestant Church in the Netherlands did not give an information about belonging to an older affiliation. For example, Members of the former Evangelical Lutheran Church in the Kingdom of the Netherlands happened to do so. People who identified with one of those three categories (NHK/GKN/or simply PKN) are all members of the Protestant Church in the Netherlands.
Welke erkende talen heeft Nederland? (in Dutch)။ Rijksoverheid (11 January 2016)။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Zaken၊ Ministerie van Algemene (19 May 2015)။ Waaruit bestaat het Koninkrijk der Nederlanden? – Rijksoverheid.nl။
Netherlands။ International Monetary Fund (April 2019)။
Gini coefficient of equivalised disposable income – EU-SILC survey။ Eurostat။
Human Development Report 2019 (PDF) (in en)။ United Nations Development Programme (10 December 2019)။ 30 April 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wet geldstelsel BES။ Dutch government (30 September 2010)။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Time Zone & Clock Changes in Amsterdam, Netherlands (in en)။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (in Dutch)။ Government of the Netherlands (17 November 2017)။ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Netherlands vs. Holland။ Netherlands Bureau for Tourism and Congresses (18 October 2012)။ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Netherlands boundaries in the North Sea။ Ministry of Defence။ 19 August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Gemeentelijke indeling op 1 januari 2019 (in Dutch)။ CBS Classifications။ Statistics Netherlands (CBS)] (1 January 2019)။ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
De waterschappen (in Dutch)။3November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
31.954, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (in Dutch)။ Eerste kamer der Staten-Generaal။ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “De openbare lichamen vallen rechtstreeks onder het Rijk omdat zij geen deel uitmaken van een provincie.
Baarle-Hertog and Baarle Nassau။
Ministerie van Algemene Zaken (19 May 2015)။ Waaruit bestaat het Koninkrijk der Nederlanden?။
KCT. Official website of the Dutch Commando Foundation Archived5February 2011 at the Wayback Machine.. Korpscommandotroepen.nl (14 April 2010). Retrieved on 21 August 2012.
Ministerie van defensie – Werken bij Defensie။ Mindef.nl။ 11 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Defensie hard getroffen door bezuinigingen။ Ministry of Defence။7August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Red Cross urges Netherlands to sign UN nuclear weapons ban"၊ NL Times၊ 11 February 2019။
Wayback Machine (4 June 2017)။ ၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The World Factbook။ 22 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Inflation up to 2.8 percent။ Statistics Netherlands (6 June 2013)။ ၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Unemployment further up။ Statistics Netherlands (15 May 2013)။ ၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
More employed in February (21 February 2019)။ ၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Amsterdam en de wereld: Toerisme en congreswezen။ 15 February 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။. ez.amsterdam.nl
Kreijger၊ Gilbert။ "Dutch allow Wilders' anti-Pole website, EU critical"၊ Reuters၊ 10 February 2012။
Global Competitiveness Report 2012–2013။ World Economic Forum (5 September 2012)။ 10 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Dutch curse: how billions from natural gas went up in smoke Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine. LEES MEER, 17 June 2009
The Groningen Gas Field။ GEO ExPro Magazine (2009)။ 19 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၇ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Energy Policies of IEA Countries။ International Energy Agency။
The Agreement on Energy for Sustainable Growth။ SER။
Energy Policies။ IEA။
The hunt for gas and oil reserves that are more difficult to extract။ EBN။7September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Netherlands Energy System Overview။ IEA။
Energy Agreement for Sustainable Growth။ International Energy Agency။
National Energy Outlook 2017။ Energy Research Center of the Netherlands။
Energy support measures and their impact on innovation။ European Environmental Agency။
European Energy Market Reform။ Deloitte။
Factsheet Agri-food : Holland isaworld-leading supplier of sustainable, healthy, agri-food products။ ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Farming in the Netherlands: Polder and wiser"၊ Sevenum: The Economist Group၊ 23 August 2014။ ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dutch agricultural exports top 80 billion Euros (16 January 2015)။
Ministerie van Landbouw၊ Natuur en Voedselkwaliteit (17 January 2020)။ Dutch agricultural exports worth €94.5 billion in 2019 - News item - Government.nl။
Netherlands: Agricultural situation။ USDA Foreign Agriculture Service။ ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"SWOV Fact sheet" (PDF) (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Leidschendam, the Netherlands: SWOV, Dutch Institute for Road Safety Research။ July 2013။ 15 April 2010 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Text "Mobility on Dutch roads" ignored (အကူအညီ); zero width space character in |accessdate= at position4(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
Waard၊ Jan van der; Jorritsma၊ Peter; Immers၊ Ben (October 2012)။ New Drivers in Mobility: What Moves the Dutch in 2012 and Beyond? (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ Delft, the Netherlands: Organisation for Economic Co-operation and Development International Transport Forum။ 17 January 2013 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ zero width space character in |accessdate= at position4(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
CIA World Factbook။ U.S. Central Intelligence Agency (2012)။ ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Road density (km of road per 100 sq. km of land area)။ The World Bank Group (2014)။ ၂၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Toor၊ Amar (10 July 2013)။ Every Dutch citizen will live within 31 miles of an electric vehicle charging station by 2015။ The Verge။ Vox Media, Inc။ 11 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
CIA World Factbook။ U.S. Central Intelligence Agency (2012)။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"NS to up frequency of Amsterdam to Eindhoven trains to six an hour - DutchNews.nl" (in en-GB)၊ DutchNews.nl၊ 21 June 2017။
(RVO)၊ Netherlands Enterprise Agency (17 July 2015)။ Holland Publications။ hollandtrade.com။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Cycling in the Netherlands။
CBS StatLine – Motor vehicles; general overview per period and technological features။
European Cyclists' Federation – The first EU wide ECF Cycling Barometer launched။ 14 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Quality of Transport report (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ European Commission။ December 2014။ p. 11။ 8 September 2015 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (အကူအညီ); zero width space character in |accessdate= at position4(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
"Why is cycling so popular in the Netherlands?"၊ BBC News။
Future of Transport report (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ European Commission။ March 2011။ p. 8။5February 2015 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ zero width space character in |accessdate= at position4(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
CROW Fietsberaad။ 17 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Port of Rotterdam Statistics 2013။ Port of Rotterdam။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Bijna 64 miljoen—zo veel passagiers zag Schiphol nog nooit – NOS (in Dutch)။ Nederlandse Omroep Stichting (9 January 2017)။9January 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The World Factbook – Netherlands။ Central Intelligence Agency။ ၁၈ မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Max Roser (2014)၊ "Total Fertility Rate around the world over the last centuries"၊ Our World In Data, Gapminder Foundation၊7August 2018 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး
Garssen, Joop, Han Nicolaas and Arno Sprangers (2005)။ Demografie van de allochtonen in Nederland (in Dutch)။ Centraal Bureau voor de Statistiek။ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Expats in Nederland။ 19 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Feiten en cijfers over immigratie – Pagina 5။ Ons Amsterdam။
Enserink၊ Martin။ "Did natural selection make the Dutch the tallest people on the planet?"၊7April 2015။
Reported health and lifestyle။ Centraal Bureau voor de Statistiek။ ၂၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Vasileva, Katya (2011) 6.5% of the EU population are foreigners and 9.4% are born abroad Archived 28 January 2012 at the Wayback Machine., Eurostat, Statistics in focus vol. 34.
American FactFinder, United States Census Bureau။ Census 2006 ACS Ancestry estimates။ Factfinder.census.gov။ 28 April 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၃၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dutch colonialism, migration and cultural heritage Archived 28 April 2011 at the Wayback Machine. (PDF). Royal Netherlands Institute of Southeast Asia and Caribbean Studies.
CBS – Income distribution – Extra။ 30 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၉ မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Schmeets၊ Hans; Mensvoort၊ Carly van (2011)။ Religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen, 2010–2014 (PDF)။ Centraal Bureau voor der Statistiek။ 21 February 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Hoe God (bijna) verdween uit Nederland"၊ NOS၊ 13 March 2016။ ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Bernts၊ Tom; Berghuijs၊ Joantine (2016)။ God in Nederland 1966-2015။ Ten Have။ ISBN 9789025905248။
"Two-thirds of people in Netherlands have no religious faith" (in en-GB)၊ DutchNews.nl၊ 14 March 2016။
Feestdagen Nederland။ Beleven.org။ ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Ongelovigen halen de gelovigen in"၊ Dossier Relige၊ der Verdieping Trouw၊ 16 January 2015။ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; vanaf 1849; 18 jaar of ouder"၊ 15 October 2010။
Een op de zes bezoekt regelmatig kerk of moskee။ Central Bureau of Statistics, Netherlands (2012)။ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Godsdienstige veranderingen in Nederland။ 25 January 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Leerplicht (11 December 2009)။ ၆ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Leerplicht en kwalificatieplicht (February 2017)။ ၆ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Health Consumer Powerhouse။ healthpowerhouse.com။ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"U.S. scores dead last again in healthcare study"၊ Reuters၊ 23 June 2010။
Toward Higher-Performance Health Systems: Adults' Health Care Experiences In Seven Countries, 2007။
Health Consumer Powerhouse – Health Care System's Indexes and reports။
Zorgrekeningen; uitgaven (in lopende en constante prijzen) en financiering (in Dutch)။ Centraal Bureau voor de Statistiek: StatLine (20 May 2010)။ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sport၊ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en (18 February 2010)။ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport။ minvws.nl။ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Same-Sex Marriage Legalized in Amsterdam"၊ CNN၊ 1 April 2001။ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3March 2016။
Fossil CO2 emissions of all world countries - 2018 Report။ EU Science Hub (2018)။ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Arcadis Sustainable Cities Index Report"၊ 2015။
Arcadis Sustainable Cities Index။
Sustainable enterprise | RVO.nl။
2 Unlimited။ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Amsterdam Dance Event။ local-life.com။
The international Dance industry assembles in Amsterdam next week။ Dutch Daily News (12 October 2012)။
Canto Ostinato by Simeon ten Holt။
international Archives » Page2of3» Andre Rieu။
Top 25 Tours of 2009။ Billboard (11 December 2009)။
Chicago Symphony Tops U.S. Orchestras။ NPR.org (21 November 2008)။
Sport in Nederland (in nl)။ 25 September 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ . ned.univie.ac.at
Ledental sportbonden opnieuw gestegen (in nl) (24 July 2006)။ 12 August 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Zandvoort secures F1 return as Dutch GP venue (14 May 2019)။ ၁​ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hart, Jonathan (2008)။ Empires and Colonies။ Polity။ pp. 201–။ ISBN 978-0-7456-2614-7။ ၅ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ zero width space character in |accessdate= at position3(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
အမှန်​တော့ ယ​နေ့ထိ ဒတ်ချ်​တော်ဝင်မိသားစု နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ အချမ်းသာဆုံးမိသားစုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကြွယ်ဝမှု၏အ​ခြေခံအ​ကြောင်းတစ်ခုမှာ ကိုလိုနီ​ခေတ်ကုန်သွယ်​ရေးဖြစ်သည်။"In Pictures: The World's Richest Royals"၊ Forbes၊ 30 August 2007။ ၅ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Koshy၊ M. O. (1989)။ The Dutch Power in Kerala, 1729–1758။ Mittal Publications။ p. 61။ ISBN 978-81-7099-136-6။
Archived 12 March 2016 at the Wayback Machine. 9th Madras Regiment